Tantara: Mihaona Amin’i Farao i Mosesy sy Arona - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Avy eo i Mosesy sy Arona dia nandeha nihaona tamin’i Farao. Hoy izy ireo taminy: ‘Hoy i Jehovah Andriamanitry ny Israely: “Avelao ny oloko handeha mandritra ny telo andro, mba hahafahany hanao fanompoam-pivavahana ho ahy any an’eﬁtra.”’ Nefa hoy ny navalin’i Farao: ‘Tsy mino an’i Jehovah aho, ka tsy halefako ny Israely.’
Tezitra i Farao, satria naniry hahazo fotoana tsy ﬁasana ny vahoaka mba hanaovana fanompoam-pivavahana ho an’i Jehovah. Koa dia notereny hiasa maﬁmafy kokoa ihany izy ireo. Nanome tsiny an’i Mosesy ny Israelita noho ny fomba ratsy nitondrana azy ireo, ary dia nalahelo i Mosesy. Nilaza taminy anefa i Jehovah mba tsy hanahy ny amin’izany. ‘Hataoko izay hampandefasan’i Farao ny oloko’, hoy i Jehovah.
Fantatrao ve ny tsirairay amin’ireo loza folo? Aoka hofantarintsika ny amin’izy ireo.
Nanao ahoana ny ﬁhetsiky ny Israelita, rehefa nahita ny fahagagana nataon’i Mosesy sy Arona?